Zavakanto iraisam-pirenena: nomena medaly volamena i Shyn sy i Denise | NewsMada
Zavakanto iraisam-pirenena: nomena medaly volamena i Shyn sy i Denise
Vaovao lehibe ! Notoloran’ny Fédération Internationale du Tourisme, tamin’ny alalan’ny Comité International des Arts et de la Culture ny medaly volamena ho an’ny zavakanto sy ny kolontsaina iraisam-pirenena i Shyn sy i Denise. Notontosaina tany Toamasina, ny alin’ny alarobia lasa teo ny lanonana nanolorana izany ireto mpivady samy mpanakanto ireto.
“Naninona no i Shyn sy i Denise no nomena ny medaly volamena? Satria efa mpivady feno fitiavana, feno fitiavana ny mozika sy ny zavakanto. Mifameno ary samy manandratra avo ny zavakanto malagasy maneran-tany izy ireo. Tsorina fa maromaro ny mpanakanto nisafidianana, saingy nitodika tamin-dry zareo ny safidin’ny komity”, hoy ny nambaran’ny filohany, Jean Eric Duluc, izay tonga tany Toamasina nitarika ny lanonana.
“Faly, tena feno fihetseham-po… Tsy isan’andro no mahazo izany medaly volamena izany. Manosika anay hiakatra hatrany, hanohy sy hitondra avo an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny mozika izao. Tsy misy mazia ny fahombiazana fa mila ezaka…”, hoy kosa i Denise, tanatin’ny ranomason-kafaliana, raha nandray fitenenana.
Voalaza fa natao ho fanoitra ho an’ny fizahantany amin’ny firenena iray ny fanomezana medaly ny mpanakanto toy izao, avy amin’ny komity iraisam-pirenena ho an’ny zavakanto sy ny kolontsaina, ao anatin’ny federasiona iraisam-pirenen’ny fizahantany. Misy komity manokana misahana ny fanomezana ny medaly volamena. Asaina manao fanomezana amin’ny sanganasany ireo mpanakanto, ka haranty any Frantsa sy any amin’ny firenen-kafa toy ny ao amin’ny Musée Osttie, galerie d’art de Péreybère ao Maurice.